HARARE, Zimbabwe (AP) — The Latest on Zimbabwe unrest (all times local): 7:10 p.m. A collection of Zimbabwe human rights groups says at least 12 people have been killed, at least 78 have been shot and more than 240 have faced "assault, torture, inhumane and degrading treatment" in a crackdown on protests that began on Monday over a dramatic rise in fuel prices.
Pastor and activist Evan Mawarire right, arrives at the magistrates courts handcuffed in Harare, Zimbabwe, Friday, Jan. 18, 2019. A prominent pastor and activist who faces a possible 20 years in prison on a subversion charge arrived at court, one of more than 600 people arrested this week. Mawarire has called it "heartbreaking" to see the new government of President Emmerson Mnangagwa acting like that of former leader Robert Mugabe. Mawarire is accused of inciting civil disobedience online.
Armed riot police secure the area as pastor and activist Evan Mawarire, arrives at the magistrates courts in Harare, Zimbabwe, Friday, Jan. 18, 2019. Zimbabwe Lawyers for Human Rights have said in a statement that Mawarire who is among the more than 600 people arrested this week has been charged with subverting a constitutional government amid a crackdown on protests against a dramatic fuel price increase.
The Zimbabwe Human Rights NGO Forum in a statement also says 466 people have been arbitrarily arrested or detained in what it calls "massive" violations. The statement says children as young as 9 have been reportedly tortured as security forces break into private homes.
It calls it "regrettable" that Zimbabwe's government is blaming civil society leaders for some of the country's worst unrest in years.
A magistrate in Zimbabwe says there is reasonable suspicion that a well-known pastor accused of subversion amid nationwide protests committed an offense, and has set another hearing for Jan. 31.
Mawarire's lawyer Beatrice Mtetwa had argued that facts presented by the prosecution did not disclose an offense.
The U.N. human rights office is denouncing reported "excessive use of force" by Zimbabwe's security forces against protesters opposed to dramatic fuel price increases and austerity measures.
A media group says Zimbabwe's government has again forced a "total internet shutdown" after a days-long violent crackdown on people protesting dramatic fuel price increases.
MISA-Zimbabwe shares a text message from the country's largest telecom company, Econet, calling the government order "beyond our reasonable control." The shutdown faces a court challenge from MISA-Zimbabwe and Zimbabwe Lawyers for Human Rights.
A prominent pastor and activist who faces a possible 20 years in prison on a subversion charge is set to appear in court again on Friday. Evan Mawarire calls it "heartbreaking" to see the new government of President Emmerson Mnangagwa acting like that of former leader Robert Mugabe.